Third Myanmar-Australia Foreign Ministry Consultations held in Nay Pyi Taw – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
They also deliberated on further strategic cooperation in various sectors including agriculture and livestock breeding, education, health, tourism, human resources development, law enforcement, trade, investment and development cooperation.
Permanent Secretary U Myint Thu hosted the working lunch to the Australian delegation at the Park Royal Hotel in Nay Pyi Taw.
မြန်မာ-သြစတြေးလျ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခြင်း
မြန်မာ-သြစတြေးလျ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ တတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် (၇-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ လက်ထောက်ဝန်ကြီး Mr. Richard Maude တို့က ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တို့အပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နှစ်နိုင်ငံအကြား စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စများ အပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ လက်ထောက်ဝန်ကြီး Mr. Richard Maude နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား Park Royal Hotel ၌ အလုပ်သဘောနေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။